Nubia Red Magic Watch bụ smartwatch ọhụrụ nwere ikike ime obodo ruru ụbọchị iri na ise | Gam akporosis
Nubia Red Magic Watch bụ smartwatch ọhụrụ nwere ikike nke ihe ruru ụbọchị iri na ise
Onyeka Onwenu | | smartwatch
Emeputa Nubia ekwuputala otu n'ime ụzọ izizi mbụ ya nke smartwatch, ihe niile mgbe ị kwusịrị smartphones ọhụrụ Nubia Red Ime Anwansi 6 na Red Magic 6 Pro Tencent. Nubia Red Magic Watch bụ elekere smart ezubere iji dochie ndị gara aga, Nubia Watch na Nubia Alpha.
Ihe Nlereanya a pụtara ìhè inwe nnwere onwe nke ihe karịrị izu abụọ na iji ya, ọ na-enye ya ụfọdụ atụmatụ dị ịrịba ama, niile na-enweghị efu ụdị ihuenyo AMOLED. Companylọ ọrụ ahụ na-ezube ire ọtụtụ nkeji elekere a na mmalite nke a ga-ebu ụzọ mee na China.
1 A na-ewu Nubia Red Magic Magic na-adịgide adịgide
2 Autonomy ruo ogologo oge
2.1 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
A na-ewu Nubia Red Magic Magic na-adịgide adịgide
El Nubia Red Magic Watch kpebiri bulite ihuenyo 1,39-inch OLdị AMOLED nwere mkpebi nke 454 x 454 pikselụ wee bịa na obere mpempe akwụkwọ Gorilla Glass. Ihe ngosi ahụ zuru ezu, ya na akụkụ ụfọdụ na-apụta iji nye egwuregwu egwuregwu ihe ngosi ọhụụ ọhụrụ a.
Enwere ike ịzụta eriri na silicone ma ọ bụ akpụkpọ anụ, onye na-azụ ahịa nwere ike ikpebi n'ọtụtụ agba tozuru etozu mgbe ịzụrụ ya. O nwere nguzogide mmiri nke 5 ATM, ihe dị ka mita 50 ma na-eguzogide ụdị splashes niile na-ekele akwụkwọ mpempe akwụkwọ a nke Gorilla Glass.
Njikọta bụ Bluetooth maka njikọ na ekwentị, Ọ na-abịa na GPS ejiri, ngụkọta nke ụdị egwuregwu 16, mmetụ oxygen na nnwere onwe dị ihe dị ka ụbọchị 15. Ọ gụnyere ihe mmetụta PPG (ihe nyocha anya na-atụgharị uche nke ọkụ, nke na-agbanwe, n'etiti ihe ndị ọzọ, dabere na ọbara na-agafe site na ọkụ ọkụ).
Autonomy ruo ogologo oge
Tojupụtara nke Nubia Red Magic Watch na-ekwe nkwa nnwere onwe nke ihe dị ka ụbọchị 15 na nkịtị ojiji, mgbe ọ na-shortened dabere ma ị na-eji ya mgbe niile maka egwuregwu. Otu akụkụ nke ịkọwapụta bụ na ọ na-azọpụta ike ebe anyị anaghị eji akụkụ ya eme ihe.
Igwe batrị dị iche iche na-agbanye ụgwọ site na chaja USB-C, site na 0 ruo 100% n'ihe dị ka elekere elekere na ihe dị ka nkeji iri abụọ iji wuchaa ya. Nubia acha uhie uhie na-eche nche Ọ na-enye ọhụụ mara mma elekere, yana ịpị gburugburu na batrị nwere ikike dị elu, ha kwuru na ọ bụ ihe dịka 300 mAh.
IKIRU 1.39-anụ ọhịa AMOLED nwere 454 x 454 pixel mkpebi / ozodimgba Glass nchedo
MMIRI 5 igwe ndọrọ ego
SENSORS Ihe mmetụta PPG
UMUAKA Ruo ụbọchị 15
Software Sportsdị egwuregwu 16 / mmịpụta ikuku oxygen
Mbibi na ibu ibu 30 grams
El Nubia Red Magic Magic nwere ọnụahịa abụọ dị iche iche Dabere na ụdị ị họọrọ, yuan 599 (ihe dị ka euro 72 iji gbanwee) maka ụdị siliki na 699 yuan maka ụdị akpụkpọ anụ (ihe dị ka euro 90). Maka ugbu a, ụbọchị mmalite na Spain amaghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Nubia Red Magic Watch bụ smartwatch ọhụrụ nwere ikike nke ihe ruru ụbọchị iri na ise
Google kwụsịrị ire ya mebere iko nke kaadiboodu Google Cardboard